Guinea-Bissau - Domingos Simões Pereira: "N'etiti mụ na Umaro Sissoco Embaló ọ dịghị ihe anyị ga-atụle" - Jeune Afrique - TELES RELAY
Guinea-Bissau - Domingos Simões Pereira: "N'etiti mụ na Umaro Sissoco Embaló ọ dịghị ihe anyị ga-atụle" - Jeune Afrique
Ajụjụ ọnụ nke Domingos Simões Pereira, bụ onye jidere Courtlọikpe Kasị Elu ka ọ gbaa aka na ntuli aka Umaro Sissoco Embaló na ntuli aka onye isi nke 29 nke Disemba, ma rịọ ka a kọọghachi ya. Site n'ụzọ, ọ gbagharaghị onye iro ya.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ ka ntuli aka onye isi ala gasịrị, Obí nke Place des Héros de la Nation ka na-eche ndị bi na ya ọhụrụ. Esemokwu dị n'etiti Umaro Sissoco Embaló, kwuru na Jehova meriri Electionlọ ntuli aka na ntanetị (CNE) nwere 53,55% nke votu, nye onye iro ya Domingos Simões Pereira, nke a maara dị ka “DSP”, adịghị egbu oge ije ozi.
Nkpukpo obi: a nghọtahie njikọ n'etiti Courtlọikpe Kasị Elu na CNE. Nke ikpeazụ, ọtụtụ oge thelọ ikpe kpọrọ ya ka ọ gaa na nyocha nke nkeji niile, ikwugharị na ị kwenyeere ya, ugbu a nsonaazụ ekwuputara na Jenụwarị 1st. N'ime akwụkwọ ozi ezigara ECOWAS na February 17, CNE gosipụtara na ọ "enweghị ike ime ihe ọ bụla".
Inglọ otu pati Party maka nnwere onwe nke Guinea na Cape Verde (PAIGC), otu pati kacha mkpa na nzuko ndị mmadụ. Onye bụbu Mịnịsta ala ahụ na-akpọ maka iweghachi vootu iji mebie oge a. Meekwa ka onye na-emegide ya ghara ịgafe.
Na-eto eto Africa: Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ ka ntuli aka ahụ gasịrị, nsogbu ahụ na-adịgide. Kedu otu ị ga - esi chọta ihe ngwọta?
Domingos Simões Pereira: Ekwesịrị ịkọwapụta nsonaazụ ya. Mgbe CNE jụrụ ịkọwa nsonaazụ nsonaazụ, anyị gara Courtlọikpe Kasị Elu. Nke ikpeazụ chịrị ma rịọ ka ịmalitegharịa ọnụ.
Dika iwu Bissau-Guinean, enweghi ike ịkwụsị usoro a. N’aka ozo, mgbe agụọ ndi ịtụ vootu n’ụlọ ọrụ ịtụ vootu, ọ gaghị akwụsị rue oge nkeji nke mba ahụ. Ọ bụ n’elu akwụkwọ a ka Onye isi ala CNE kwupụtara nsonaazụ ya.
Site na oge CNE kwuru na ọ kụọla afọzighi na usoro nke iguzobe mkpokọta mba na nsonaazụ ahụ, ọ ga-ebido ọzọ. ab initio. Ab initio, ọ pụtara ịkọghachi vootu. Ndị ikike kwuru na ọ ga-ewe awa 48.
Kedu ka o si sie ike ịgaghachi ịkọ ndị Bissau-Guinea niile bụ onye ha họọrọ n'ezie? CNE jụrụ. Ọ na-ekwu, na-ekwenye na ọ mehiere ihe, na ya ekpebielarị na ọ gaghị alaghachi azụ na aha onye mmeri ekwuputala na Jenụwarị 1.
Ọ bụ ihe nwute na CNE na-ahọrọ itinye akwụkwọ na ECOWAS karịa tolọikpe Kasị Elu
N'ịbụ onye nwere nchegharị ihu, CNE tụgharịrị na ECOWAS, onye mgbasa ozi akụkọ ihe mere eme na Guinea-Bissau. Regionaltù mpaghara nwere ike idozi nsogbu ahụ?
PakGNE ọgba aghara ❌😱 - EGO bụ vidiyo